Iaraha mahalala ny lalàna 2011-013 mahakasika ny fanoherana izay mipetraka kanefa tsy tokony adinoina fa ny lalàna dia miaina ary mila mivoatra manaraka ny zavatra takian` ny fiaraha-monina sy ny raharaha politika ka antony nahatonga ny fanapahana haverina atao vaovao ny lalàna ary hatsaraina kokoa. Araka ny nambarany fa miainga avy amin` ny Antenimieram-pirenena ny raharaha politika rehetra na ny fanendrena ny praiministra na ny fiaraha miasa eo anivon` ny governemanta. Mba ahafahana mihaino ireo vitsy an` isa dia napetraka io sata mifehy ny mpanohitra io. Ao anatin` izany no ahafahana mametraka ny atao hoe “institualisation de l`opposition”. Nohazavainy fa tsy ilay fidinana an-dalambe na fikomiana no hahazava dehibe ny mpanohitra fa anaty adihevitra demokratika no mametraka ny fanoherana. Anaty ity rafitra solombavambahoaka ity no hanolorana izay olona hitarika izany fanoherana izany. Anatin` io no afaka manolotra tolo-dalàna ary ao izy no afaka mifanerasera amin` ny Praiministra. Mangataka amin` ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC) ny zavatra maro samihafa. Iaraha mahafantatra ny “condition de recevabilitè « eny amin` ny HCC, hoy ihany izy. Ny lehiben` ny mpanohitra, amin` izay, dia afaka manasazy ny governemanta amin` ny alalan` ny « motion de censure ». Fivoarana no entin` io lalàna io ary fanatsaràna bebe kokoa ary olona mianga voafidin` ny vahoaka no tokony hitarika izany fanoherana izany, hoy hatrany Imbiki Herilaza.